Bogga ugu weyn » Muuqaalka
Muuqaalka Caalamka March
Toban sano ka dib Dunida Koowaad ee Nabadgalyada iyo Dagaal-la'aanta, sababihii ku dhiirrigeliyay, ka fog in la yareeyo, ayaa la sii xoojiyay. Waxaan ku nool nahay adduunyo halkaas oo dowladnimada midnimada leh ay ku korto. Doorka aasaasiga ah ee Qaramada Midoobay ee xalinta khilaafaadka caalamiga ah ayaa luminaya awooda. Adduunyo ku dagaallama tobanaan dagaal, oo inta badan lagu aamusiyo macluumaad khaldan. Dhibaatooyinka deegaanka ayaa ah Kulanka Rome nus qarni kahor Iyadoo ay jiraan malaayiin muhaajiriin ah, qaxooti iyo dadka deegaanka ku barakacay oo lagu qasbay inay la tartamaan xuduudaha ay ka buuxaan cadaalad darro iyo geeri. Halkaas oo loogu talagalay in lagu caddeeyo dagaallo iyo xasuuq loo geysto khilaafaadka ilaha dhaqaale ee sii kordhaya. Halka isku dhacyada "taarikada juqraafi ahaan" ee u dhexeeya awoodaha waaweyn iyo kuwa soo ifbaxay ay kicinayaan xiisado cusub oo khatar ah. Adduunyo halkaas oo damaca maalqabeenku ugu qanisan yahay, xitaa wadamada horumarsan, rajo kasta oo bulshada samafalka ah. Mowjadaha cadhada ee la soo saaray waxay aakhirka u hoggaansamaayaan isla markaana abuuraan dhaqdhaqaaq naxdin leh oo diidmada iyo nacaybka loo qabo qaxootiga iyo soogalootiga. Marka la soo koobo, adduunyo, kaas oo xaq u siinta rabshadaha, oo loogu yeero "nabadgelyo", waxay kordhineysaa halista in militariga ay uga bataan cabirro aan la xakameyn karin.
El Heshiiska ku-meel-gaarka ah ee Hubka Nukliyeerka, laga bilaabo 1970 , Ka fog furitaanka wadada hubka hub ka dhigista, waxay sii adkeysay
awoodda baabi'inta ballaaran, ballaarinta xitaa kooxdii ugu horreysay ee dhimashadii adduunka oo ay weheliso hubka nukliyeerka ee hadda ku jira gacanta Mareykanka, Ruushka, Shiinaha, Boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska, Israel, India, Pakistan iyo Jamhuuriyadda Korea. Waxaas oo dhami waxay sharraxayaan sababta ay Guddiga Atomaatiga Saynisyahannada u dhigayaan tusaha hadda jira (Saacadda Qiyaamaha) maaddaama khatarta ugu weyn ee caalamka ay ku noolyihiin Qalalaasaha Gantaalaha Cuba in 1962.
Maanta, 2ª Aduunka March ee loogu talagalay Nabadda iyo Dagaalka, waa mid aad uga sii muhimsan sidii hore. Waxaa la qorsheynayaa inuu ka tago Madrid Oktoobar 2 ee 2019 si uu u wacayo dhammaan qaaradaha, illaa iyo Maarso 8 ee 2020 oo ku dhammaan doona Madrid. Waxay kobcin doontaa waxbarashada ee rabshadaha iyo xiriirka mideynta dhaqdhaqaaqyada adduunka oo idil ay difaacayaan ayna hormarinayaan
dimuqraadiyadda, caddaaladda bulshada iyo deegaanka, sinnaanta jinsiga, wadajirka u dhexeeya dadka iyo joogtaynta nolosha meeraha. Bisha maarso oo raadineysa inay muujiso oo ay ku xoojiso dhaqdhaqaaqyadan, jaaliyadaha iyo ururadan, isku-duubnaan caalami ah oo ku aaddan ujeeddooyinka soo socda:
Kor u qaad baaq weyn oo caalami ah "annaga, dadka, oo ka mid ah Jaartarka Qaramada Midoobay, si ay u taageeraan Heshiiska Mamnuucidda Hubka Hubka Nukliyeerka ah, taas oo cirib-tiraysa suurtagalnimada masiibooyinka qorsheysan iyo sii-haynta ilaha si loo xalliyo baahiyaha aasaasiga ah ee aadanaha.
Dib u soo celi las Qaramada Midoobay , siinta ka qaybgalka bulshada rayidka, dimuqraadiyadda Golaha Ammaanka si loogu badalo si dhab ah Golaha Nabadda Adduunka . iyo abuurista a Golaha Amniga Deegaanka iyo Dhaqaalaha, kuwaas oo xoojinaya shanta mudnaanood: cuntada, biyaha, caafimaadka, deegaanka iyo waxbarashada.
Qaado a Qorshaha Ergada Gaajada ee Gaajada, sida waafaqsan SDGs (Hadafyada Horumarka Sare), kaas oo leh miisaaniyad lagama maarmaanka u ah waxtarka.
Dhaqso a Qorshaha Tallaabooyinka Degdegga ah ee ka dhan ah dhammaan noocyada suubanaanta, cunsuriyadda, kala soocida, takoorka iyo cadaadiska ee jinsiga, da'da, jinsiyadda, dhalashada ama diinta .
Kordhin a Jaartarka Dimuqraadiga ee Muwaadiniinta Caalamka, taas oo dhameystiraysa Baaqa Xuquuqda Aadanaha (madani, siyaasadeed iyo bulsho dhaqaale).
Ka mid noqo Axdiga Dhulka "Ajandaha Caalamiga ah" ee SDGs, si wax ku ool ah loola macaamilo isbeddelka cimilada iyo dhinacyada kale ee xaalufinta deegaanka.
Horumarinta Xadgudub fir-fircoon ma leh si ay u noqoto isbedel dhab ah oo adduunka ah, in laga guuro dhaqanka soo jiidashada, rabshadaha iyo dagaallada dhaqanka nabadda, wadahadalka iyo adkeysiga ee degaan kasta, waddanka iyo gobolka ee aragtida caalami ah ee noo gudbiya tan World March for Peace iyo shuban.
Soo rogo Manifesto PDF
Warqad loogu talagalay Dunida oo aan Rabshad lahayn
Soo dejiso qoraalka Manifesto (Faransiis)